Ornagai Release Now — MYSTERY ZILLION
Ornagai Release Now
February 2009 edited February 2009 in MZ News
www.ornagai.com ကို စတင် release လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Just Beta ပေါ့။ OpenSearch လည်းထည့်ပေးထားတယ်။ Firefox ရဲ့ ညာဘက် ထောင့်မှာ opensearch လေးမှာ လင်းလာရင် ထည့်လိုက်ရုံပဲနော်။
ornagai မှာ ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ မတွေ့ရင် ဘေးနားက dictionary ထဲမှာ ရှာလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ornagai မှာ ပြန်ဖြည့်ပေးပေါ့။ အားလုံးရဲ့ အင်အားကို စုစည်းမှ အဆင်ပြေလာမှာပေါ့။
ရအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်အောင် လုပ်ထားတယ်။ ကို လူပျိုကြီးရေး စမ်းကြည့်ပြီး လိုတာတွေ ပြောပါအုံး။ database ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလိုသေးလဲလို့ဗျာ။
မှားနေတဲ့စာလုံးတွေကိုလည်း ! လေးကို နှိပ်ပြီး report လုပ်လို့ရတယ်နော်။
babylone နဲ့ stardict အတွက် မကြာခင်ထွက်ပါမယ်။ အဲဒီအတွက် code မရေးရသေးလို့ပါ
webservice လည်းပါသေးဘူးနော်... အမြန်တင်လိုက်တာ.. ၁၄ ရက်နေ့ထွက်ရမှာ ၂၀ ရက်နေ့မှ တင်ဖြစ်တယ်။ :P
ornagai ကို ညမီးအိမ်ပေးထားတဲ့ စာလုံးနှင့် ကျွန်တော် ရိုက်ထားသော စာလုံးတွေ ပေါင်းထားပါတယ်။ ပြောဖို့မေ့သွားလို့ဗျာ။
Will Release At End Of Feb 2009
ဆိုပါလား .. ကျွန်တော်သိပ်မသိလို့..
Ye Htet wrote: »
ကျွန်တော့်ဆီမှာမရသေးပါ.. BROWSER Cookies ကြေင့်လားဆိုပီးလဲ ပြောင်း သုံးပေမယ့်မရပါ...။
ဘန်းကျော်သားတွေကတော့ cache ကြောင့်ပါ။ www.ornagai.com/index.php နဲ့သွားလိုက်ပါဗျာ။
ကို layong ဘာမရတာလဲဗျ။
ဟုတ်ကဲ့ ရသွားပါပြီ ။ ကျေးဇူး ကိုစေတန်နဲ့ ကိုရဲထက်။
Good job Saturn.
အခုသုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ် ပြီးမှ ဖြီးတာပေါ့။
လေကန်ဦးမယ်:D အခုအနေအထားအတိုင်းကတော့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ရှာတာလည်း တော်တော်လေးမြန်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် Dictionary သယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ရောက်ရအရပ်ကနေ ကြည်လို့ရသွားလို့ အဆင်ပြေသွားပြီ။
နောက်ဆက်လုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေကိုနည်းနည်း ပြောကြည့်မယ်။ အဓိကကတော့ Example အဖြစ်သုံးတဲ့ စာကြောင်းနမူနာ ပါသင့်တယ်ဗျ။ ရှာခိုင်းတဲ့စကားလုံး ပါတဲ့ Word တိုင်းကို ရှာပေးတာထက် Spell Check ကပိုသင့်တော်ပါတယ်။ Spell Check လုပ်ပေးတဲ့ code တွေ အလကားရနိုင်တဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူပြောတဲ့စကားလုံးကိုရှာပေး မတွေ့ရင် ဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ Spell Corrected ကိုရှာပေး။ ဒါမျိုးကပိုကောင်းမလားလို့ ထင်လို့ပါ။ နောက်ပြီးတော့ အရေးကြီးတာရှိသေးတယ် ရှာတွေ့တဲ့စကားလုံးတွေမှာ တူတဲ့စကားလုံးကို အရောင်ခွဲထားတာတွေ့တယ် ရည်ရွယ်တာကတော့ ဒီစကားလုံးတူတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါ ဒါပေမယ့် စကားလုံးတစ်လုံးကို အရောင် နှစ်ရောင်ဆိုရင် တော်တော်လေးဖတ်ရခက်ပါတယ်။
အပိုထည့်လို့ရတာလေးတွေ နောက်မှထပ်စဉ်းစားပြီး ထပ်ပြောဦးမယ်။ အခုမှထွက်တယ် အခုပဲ ဝေဖန်တယ်လို့လဲ ဝိုင်းမဆဲကြနဲ့ဦး။ ဒီအတိုင်းရပ်မနေပဲ နောက်ထပ်တိုးချဲ့ဖို့အတွက်ပြောတာ။ ကျန်တဲ့လူတွေကလည်း ကောင်းလိုက်တာလို့့ပဲ ပြောမနေကြနဲ့။ ဘာတွေထပ်လုပ်ရင် ပိုကောင်းမလဲပြောကြပါ။ ဒါမှ လူပေါင်းစုံရဲ့အမြင်ကို အခြေခံပြီးတော့ ထပ်ပြီး ဘာတွေ တိုးချဲ့သင့်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဗျ။
Congratulation !! Bro Saturn !!
It isagood one. I have tried and like it. :5:
Congratulation ပါ ကိုစေတန် ..
ရှာရတာ မြန်တယ်၊ ကြည့်ရတာရှင်းတယ်၊ တော်တော်သပ်ရပ်ပါတယ်။
ကျေးဇူး .. ကိုစေတန်
spell check ထည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ JSON နဲ့လည်း Autocomplete ထည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ အခု spell check တွေကို စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်
ဟုတ်ပြီဗျို့ ဆက်သာလုပ် ကူလုပ်စရာရှိရင်လည်းပြောပါ။ (မြောက်ပေးလိုက်ဦးမယ်:D) Good တယ်ထင်ရင် Do သာ Do ဗျာ။
ကိုစေတန်ကြီး Search button ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ် တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဥိးနော်။ Enter နှီပ်မှသွားသွယ်။ Search နှိပ်ရင်မသွားဘူး။
Gipsy wrote: »
ဟုတ်ပါ့ဗျာ မောက်နဲ့ နှိပ်လို့ကတော့ တုတ်တုတ်မှတောင် မလှုပ်ပါဘူးဗျာ။:D ကိုယ်ကလည်း Enter နှိပ်နေကျဆိုတော့ စောစောက သတိမထားမိဘူး။:D
spell checking ထည့်ထားတယ်နော် windows မှာ spell checking က ရေးလို့မရဘူး။ ဒါနဲ့ linux ကနေ ရေးပြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် design သည်းခံပေးပါ။
မည်သူများ Approve လုပ်ပေးမည်ကိုသိချင်ပါသည်။ အမ်ဇက် က မင်မင်တွေပဲလားဗျ။ ကျေးဇူးပါနော်။
MZ dict ကို အသစ်တဖန် ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ အဓိက ပါဝင်ခဲ့သူတွေ apporve လုပ်ပါတယ်။ approve လုပ်တဲ့လူတွေကိုတော့ အခုအချိန်မှာ hidden ပါ။ beta version ဖြစ်တာနဲ့အညီ မပြည့်စုံတာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
မသိလို့မေးပါရစေဦးဗျာ ဘာလဲဗျ Approve လုပ်တယ်ဆိုတာ။ ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ထားတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား ဘယ့်သူ့ကို Approve လုပ်ခိုင်းဖို့လိုသေးလို့လဲ။ နားမရှင်းဘူးနော်
ကိုလူပျိုကြီး .. ကျနော်ထင်တယ် approve လုပ်တယ်ဆိုတာက စာလုံးလိုနေလို့ တွေ့တဲ့သူက ထပ်ဖြည့်တဲ့ အခါ need to approve ဆိုတာပေါ်လာတယ် .. အဲဒါကိုပြောတာထင်တယ် ..
approve လုပ်ပေးမယ့်သူကို စောင့်ရတာပေါ့ ..
ပုံမှန် အရင်က မပါ၀င်ခဲ့တဲ့ လူတွေ ရေးရင် အက်ထမင်တွေရဲ့ approve ကို စောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ...
ဟိုးအရင်ကတည်းက ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့လူတွေ ရေးပေးရင်တော့ အက်ထမင်ရဲ့ approve ကို စောင့်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သဘောကို ပြောတာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...